Nosy Virgin US - Fanombanana ny faharetana | Fiaretana haran-dranomasina
Nosy Virgin US - Fanombanana ny faharetana
Manombana ny faharetan'ny faharetan'ny Coral reefan'ny St. Croix, Nosy Virijiny Amerikana
St. Croix, Nosy Virgin Virgin (USVI)
Ny haran-dranomasina dia toeram-ponenana mavitrika foana izay hisian'ny korontana episodika ary hamerina ny famantaranandro ny fitomboan'ny haran-dranomasina, arahin'ireo vanim-potoana iverenan'ny rafitra. Tao anatin'ireny toe-javatra ireny dia nivoatra ho fonenana maharitra ny haran-dranomasina - afaka mamerina sy mitazona ny fiasan'ny tontolo iainana izy ireo aorian'ny fikorontanana - saingy io fanoherana voajanahary haran-dranomasina io dia simbaina ankehitriny. Miatrika fanerena tsy mbola nisy toy izany ny vatohara ka tsy maintsy manohana sy manangana faharetana ny mpitantana sy ny mpiaro ny tontolo iainana amin'ny fotoana sy toerana mety. Amin'ny maha-rafitra fototra azy, ny faharetana dia nalaza be tamin'ny mpandala ny tontolo iainana misokatra amin'ny varavarankely vaovao'fanararaotam-pahefana'manokatra fisie PDF Tao anatin'ny toe-draharaha fitantanana dia sarotra. Ny mpitantana dia afaka manamaivana ny adin-tsaina, manohana ny fanarenana, ary manabe sy manentana ny saina, saingy mila fampahalalana izay manampy amin'ny fanohanana ireo hetsika ireo. Ity fandalinana ity dia mamaritra ny fomba ahafahana mandanjalanja sy mampifanaraka ny fitantanana ny fitantanana ny fanombanana ny faharetan'ny fianakaviana.
Io no iray amin'ireo fanombohan-danja goavana voalohany amin'ny faharetan'ny famindrahindrana ny fampiasana azy endri-tsoratra fohy avy amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMcClanahan et al. (2012)manokatra fisie PDF ary manaraka ny torolàlana omen'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMaynard sy Mcleod (2012)manokatra fisie PDF . Ny vokatra azo avy amin'ny fanadihadiana dia fanombanana ny fari-pahaizana ara-tsiansa amin'ny faharetan'ny elanelana (avo, midina na ambany) miaraka amin'ny fanombantombanana ny fiantraikan'ny angovo anthropogenic (avo, midina na ambany). Ireo manampahaizana sy mpiaro ny tontolo iainana dia afaka mampiasa ny vokatry ny fanadihadiana mba hanohanana ny ezaka amin'ny fanatanterahana ny vokatry ny fiarovana, toy ny fananganana tambajotram-piarovana an-dranomasina, mikendry ny fihetsika hampihenana ny adin-tsaina, ary ny fanabeazana sy ny fandraisana anjara amin'ireo mpiray antoka sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Ao anatin'ity tetikasa ity ao amin'ny Nosy Virijiny Amerikana (USVI), ireo tetikasa tetikasa dia nanantena ny hampiasa ny tomban'ezaka mitam-piadanana mba hahatanteraka ireto tanjona manaraka ireto:
Fantaro ireo tranonkala manana faharetana avo izay tsy ao anatin'ny faritra voaaro an-dranomasina (MPA).
Mitandrema fandrahonana any amin'ny tranonkala miaraka amin'ny faharetana avo sy ambany ho an'ny ezaka fiarovana amin'ny fiarovana.
Manamboara fitaovana hanampiana amin'ny fanabeazana sy ny fandraisana andraikitra momba ny maha-zava-dehibe ny Islandy Buck sy ny MPAs any atsinanana.
Manangana toeram-piofanana ho an'ny fanondranana ny vatohara any am-pianarana.
Ny dingana natao hampitsaharana ny fanadihadiana dia dingana iray ihany no hazavaina ao amin'ny Resilience Analysis Tutorial (PDF). Ny mpitarika ny tetik'asa sy ny komity faharetan'ny TNC ho an'ny USVI dia nanapa-kevitra hoe inona ireo mari-pahaizana momba ny faharetana hampidirina ao amin'ny fanadihadiana amin'ny alàlan'ny fizotran'ny consultative. Ny mpitarika ny tetik'asa dia namorona takelaka misy ny 30 amin'ireo mari-pamantarana faharetana voalaza ao amin'ny McClanahan et al. (2012) famerenana. Nentina tany amin'ny Komity ny raharaha fa tsy tokony hofongarina ireo tondro tsy ao amin'ny 20 ambony noho ny fahitana ny lanjany sy ny tanjaky ny porofo. Nifanarahana ity sosokevitra voalohany ity; ny antony ara-drariny izay ampidirina amin'ny mari-pamantarana fanampiny dia manalefaka ny lanjan'ireo tondro hafa tsirairay. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny lisitr'ireo tondro fohy kokoa izay manan-danja amin'ny toetoetra fanoherana sy ny fizotran'ny faharetana dia tsara kokoa noho ny lisitra lava izay misy tondro malemy. Ireo mari-pamantarana sisa dia avy eo nozaraina ho ambaratonga telo mifototra amin'ny fisian'ireo angona sy ny fahatsapana fa zava-dehibe ny fanoherana sy ny faharetana ao amin'ny USVI. Ny mari-pamantarana farany nampiasaina dia: karazana tsy mahatohitra, fahasamihafana amin'ny haran-dranomasina, biomassa herbivor, rakotra makroalga, rakotra vatohara, fahasamihafana eo amin'ny maripana ary aretina haran-dranomasina. Ireo adin-tsaina anthropogenika dinihina dia ny tsindry hazandrano sy ny fampandrosoana ny morontsiraka.
Ny angon-drakitra dia noraisina ary novolavolain'ny tetikasa Fandaharan'asa momba ny harena voajanahary (TCRMP sy NCRMP) nataon'ny Tetik'asa momba ny harena voajanahary (TNC), ny National Oceanic and Atmospheric Program (Programme Coral Reef Conservation Program) NOAA CRCP), sampan-draharaha misahana ny fandrindrana sy ny natiora momba ny trondro sy ny bibidia (DPRN-DFW), ary ny Foibe Nasionalin'ny NOAA ho an'ny Sampan-draharahan'ny Siansa momba ny Siansa momba ny ranomasina sy ny mpanoratra ity mpanoratra ity. A ny faharetan'ny fianakaviana dia isaina toy izao. Ho an'ireo mari-pamantarana faharetana 7 rehetra, ny isa ho an'ny tranokala rehetra (n = 267) dia 'miorim-paka' amin'ny isa faran'izay betsaka amin'ny fizarana ny sanda ho an'ny tranonkala tsirairay ho an'ny mari-pamantarana amin'ny sanda ambony indrindra amin'ireo tranonkala rehetra. Ny sanda fitarihan-trondro dia miteraka isa isaky ny tranonkala amin'ny ambaratonga 0-1 mahazatra, izay maneho ny sanda ho an'ny tranokala tsirairay (toy ny isan-jato) amin'ny sanda ambony indrindra. Alohan'ny ahazoana salan'isa an-tampon'ireo mari-pamantarana rehetra, ny isa ampidirin'ny aretina makeralgala sy ny haran-dranomasina dia esorina amin'ny 1, izay miantoka ny refy 0-1 namboarina ho làlana tokana fa ny naoty ambony dia isa tsara hatrany. Ny isa dia averina averimberina mba hamokarana ny valim-panatanjahan-tena ary avy eo ireo isa ireo koa dia miorim-paka amin'ny isa faran'izay betsaka mba hamoahana isa farany azo resena izay maneho ny 'fahaizan'ny voasedra' raha oharina amin'ny isa farany azo resahina. Ny fomba mitovy amin'izany dia ampiasaina amin'ny proxy an'ny adin-tsaina anthropogenika, izay tazonina ho misaraka amin'ny isa azo resahina. Ny soatoavina dia miorim-paka ho an'ny tranonkala rehetra isaky ny proxy hatramin'ny sanda farany ambony ary avy eo averimberina ary averina miorim-paka indray ireo sanda mba hamokarana ny isa farany. Ho an'ny adin-tsaina, ny isa ambony dia midika ho fihenjanana be. Ho an'ny faharetana sy ny fihenjanana anthropogenika, ny ambaratonga avo, salantsalany ary ambany dia ampiasaina mifototra amin'ireto sehatra ireto: 0.8-1.0 ho an'ny avo, 0.6-0.79 ho an'ny antonony ary <0.6 ho an'ny ambany.
Ireo tranonkala dia laharana avy amin'ny avo indrindra ka hatramin'ny farany ambany (avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 268). Ny isa momba ny faharetana dia aseho tsikelikely amin'ny sari-tany roa; ny iray izay mampiasa rafitra loko zana-bolongana 3-bin, maitso sy mavo ary mena ho an'ny avo, salantsalany ary ambany (jereo Figure 1), ary ny iray hafa izay mametraka ny toetry ny faharetan'ny 10 mitovy (0.10). Ny fitsipika fanadihadiana momba ny fitiliana (PCA) dia ampiasaina mba hamantarana ny fiombonana amin'ny toeran'ireo indostrialy isan-karazany ho an'ny tranokala avo lenta, midina ary ambany; Izany hoe, raha toa ka misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny filaminana farany sy ny endriny sasany (jereo ny Figure 2). Ny vokatra dia avy eo nozaraina tamin'ny mpitantana sy ny mpandray anjara mba hamantatra sy hampahafantarana ny hetsika manaraka manaraka.
Ny tanjona napetrak'izy ireo dia natsangan'ny fandalinana na hotontosaina mandritra ny volana ho avy amin'ny fampiasana ny vokatra fanadihadiana mba hiarahana amin'ireo mpiray antoka sy ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina. Tsy voamarina fa hampiasaina ity fanadihadiana ity mba hamoronana sehatra marin-tantanana fanampiny amin'izao fotoana izao. Na izany aza, ny valiny dia azo ampiasaina hamerenana ny fandefasana ny MPA amin'ny ho avy ary hampahafantatra zavatra maro hafa momba ny fitantanana mandritra ny taona ho avy izay hanohana ny faharetan'ny vatoharan-tsambon'i St. Croix. Ohatra, ny antonta-kevitra mialoha dia manome soso-kevitra fa misy fifandraisana tsara sy miavaka eo amin'ny taham-pahavitrihana avy amin'ity fanadihadiana ity sy ny fiovan'ny fari-pahaizana ara-piainana ao amin'ny sisam-patin'ny sambondanitra. Ny valin'ny fanadihadiana dia ampiasaina mba hamantarana hoe aiza no tena ilaina ny haran-koditra ary ny voka-dratsin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny fanadihadiana dia hanitatra amin'ny taona ho avy mba hampidirana ireo vatohara akaikin'i St. Thomas sy St. John mba hanatsarana ny ezaka fiarovana amin'ny alàlan'ny nosy 3 rehetra.
Ny fanombantombanana amin'ny toetr'andro dia azo atao ho toy ny birao-fanaovana fampiharana amin'ny fampiasana angon-drakitra efa misy (ny raharaha eto).
Ny dingana voalohany fanakianana dia ny famantarana ireo tanjona mazava.
Ny fizotry ny fisafidianana ireo famantarana dia miantoka amin'ny fiaraha-miasan'ny mpiara-miasa sy ny mpandray anjara amin'ny famolavolana hevitra ara-tsaina.
Ny fiaraha-miasa novolavola tamin'ny alalan'ireo fifanakalozan-kevitra ampiasaina amin'ny fisafidianana dia mampitombo ny vidim-pidirana, izay ahafahana mametraka ny vokatra azo avy amin'ny fanadihadiana.
Ny fanombantombanana amin'ny toetr'andro, ahitana tranonkala sy indostrialy maro dia mitaky ezaka amin'ny famatsiana ny fitantanam-baovao. Ny data dia tokony ho toerana iray ary ny tahirin-kevitra rehetra ho an'ny indikatrama dia tokony atao marika mba ahafahana mampitaha fampitahana eo amin'ireo tranonkala.
Ny sarintany manoritsoritra ny faharetan'ny tranokala sy ny grafika mamaritra ny fiantraikan'ny havitr'ireo taratra amin'ny laharana farany dia manampy amin'ny fanehoana tsotra sy amin'ny fomba mazava ny fandalinana sy ny lanjany ho an'ny mpiara-miasa sy ny mpandray anjara.
Ny famitana ny fanombantombanana amin'ny alàlan'ny birao dia mamantatra ny fomba ahafahana manara-maso ny fandaharam-potoana momba ny fandaharam-potoana mba hanangonana fampahalalana bebe kokoa na tsaratsara kokoa momba ny fampitomboana. Ny fampiharana koa dia mety hanampy amin'ny famantatra fomba tsara kokoa ahafahana manangona tahirin-tsarimihetsika toy izany mba hahafahan'ireo fanombanana amin'ny toetr'andro azo atomboka haingana sy haingam-pandeha kokoa noho ny voalohany.
Ity tetikasa ity dia natolotry ny The Nature Conservancy tamin'ny alàlan'ny biraon'ny St. Croix, USVI ary ny fiaraha-miasa amin'ny Programa Conservation Coral Reef NOAA.
Ny Nature Conservancy
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Fandaharanasam-piarovana ny harena an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA NCCOS Programan'ny Biogeografie
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNOAA Fandaharanasam-Pirenena momba ny harena Coral Reef
Sampan-draharaha misahana ny fametrahana sy loharano avy amin'ny USVI
Fivarotan'ny trondro sy Wildlife USVI
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamoronana ny vatohara momba ny fiovan'ny toetr'andro ao Saipan, CNMI: Fandinihana sy fiantraikany miorina amin'ny tanimbary ho an'ny fahitana sy fitantanana ny ho avy.manokatra fisie PDF
Fanamafisana sy fanaraha-maso ny haran-dranomasina
Ny fanadihadiana any amin'ny Nosy Mariana Avaratra momba ny raharaha fandalinana tranga
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTari-dalana amin'ny fitarihana ny fanaraha-maso marefomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMandroso lahatra ireo endriky ny fandeferana manan-kery mba hanohanana ny fitantanana ny haran-dranomasina amin'ny fiovan'ny toetr'andromanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiaraha-miasa momba ny fitantanana ny vatohara Adaptive eo ambany fanovana tontolo iainana manerantanymanokatra fisie PDF